Melanin သည် Dutchtown, စိန့်လူးဝစ္စ၊ MO တွင်အလှအပပြုလုပ်ခဲ့သည်• DutchtownSTL.org
Melanin Made Beauty သည် အသစ် Dutchtown မှ!
ဒီနေရာကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဤစာမျက်နှာကိုနောက်ဆုံးပေါ်မွမ်းမံခဲ့သည် ဖေဖေါ်ဝါရီလ 10th, 2021 .
ဒိန်းမတ် သောနေရာများ အဝတ် Melanin အလှအပလုပ်